> Resource > Ladnaansho > Sidee soo celinta Khasaaray Drive Logical
Sidee baan ka Khasaaray Drive caqligal u soo kaban karto, Data?
Hi, waxaan si qalad ah la tirtiro drive macquul ah ka maamulka disk ah. Waxaan leeyahay files badan oo muhiim u ah oo ku saabsan. Waxaan ka heli kartaa files kuwa aan jid lahayn ka drive in macquul ah marka laga reebo. Weli waa suurtagal, waayo, i bogsii xogta ka? Fadlan u xaliyaan aan dhibaato! Thanks.
Dhab ahaantii, aad drive macquul ah / xijaab aan si dhab ah laga badiyay. Waxa kaliya aan laga garan karaa habka, oo aan idiin noqon doonaa awood u arkaan iyo waxa ay u helaan miiska Risaalo. Si kastaba ha ahaatee, files on xijaab in weli halkaa oo aad leedahay fursad aad u weyn in la soo celiyo drive lumay macquul ah leh barnaamijka xogta dhinac saddexaad ah.
Qaado Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac sida tusaale, qaababka qalab ku soo kabashada awood badan oo qalliin fudud. Sidaa daraadeed, aad effortless karaa kabsado xogta laga badiyay drive macquul ah in qasabno yar oo sahlan, iyadoo aan loo eegayn aad drive macquul ah lumay, maxaa yeelay, aad tirtirka, Baadi nidaamka, ama xataa jeermiska fayraska. Waxaad awoodi kartaa dib u soo kabashada ku dhowaad dhammaan noocyada file ka drive macquul ah laga badiyay, oo ay ku jiraan sawirrada, videos, files audio, document files, files archive, iwm
Waxaad kala soo bixi kartaa version tijaabo ah Wondershare Data Recovery si ay u qabtaan soo kabashada xogta drive macquul ah laga badiyay hadda! Fadlan ka heli version saxda ah ee computer.
Soo Celinta lumay Drive ku tagereyso 3 Talaabooyinka
Tilmaan-bixiyahan waxa soo kabanayo drive macquul ah laga badiyay la Wondershare Data Recovery for Windows. Users Mac raaci karaan howlaha la mid ah si uu u dhameystiro dib u soo kabashada.
Tallaabada 1 Select hab kabashada si ay u bilaabaan soo kabashada xogta drive macquul ah laga badiyay
Waxaad arki doonaa 3 hababka soo kabashada ee suuqa kala barnaamijka markii socda barnaamijka. Waxa kale oo aad ka akhrisan kartaa tilmaamo faahfaahsan uu furmo.
Si aad u soo kabsado xogta laga badiyay drive macquul ah, aynu dooro "Recovery ah Barzakh," si ay u bilaabaan.
Tallaabada 2 baarista laga badiyay drive macquul ah
Hadda waxaad u baahan tahay in ay doortaan drive ay adag tahay in laga badiyay drive macquul ah ku jiray oo guji soo socda si loo ogaado drives macquul ah waxay ku.
Halkan waxa aad ku arki doonaa oo dhan qoruhu ku wadid in jirka, kaliya aad u baahan tahay in ay doortaan aad xijaab badiyay oo guji "bilow" badhanka si ay u bilaabaan baar files waxa on.
Tallaabada 3 soo celin badiyay drive macquul ah
Ka dib markii iskaanka, heli files aad badiyay drive macquul ah lagu soo bandhigi doonaa in uu furmo. Fadlan u arkaan helay magaca faylka ama Falanqeynta helay sawiro si aad u hubiso sida badan files aad bogsan karaan drive in macquul ah.
Markaas kaliya aad u baahan tahay si ay u xusaan faylasha aad rabto in aad dib u soo ceshano oo guji "Ladnaansho" badhanka si ay u xajisan si aad u computer.